Maxay tahay sababta ay xalay Koobka u wada qaadeen Iniesta iyo Busquets?? – Gool FM
Maxay tahay sababta ay xalay Koobka u wada qaadeen Iniesta iyo Busquets??
Byare May 28, 2017
(Catalonia) 28 Maajo 2017. Kooxda Barcelona ayaa xalay ku guuleystay Copa del Ray markii saddexaad oo xiriir ah kaddib markii ay ka adkaatay naadiga Deportivo Alaves.
Sida caadada ah waxaa koobka sare u qaada kabtanka kooxda, Andres Iniesta ayay ahayd inuu koobka kor u dalaco balse shaashadaha ayaa soo qabtay iniesta iyo Busquets oo koobka hal mar wada qaadaya.
Kubbad qaabeeyaha reer Spain ayaa wareysi uu siiyay jariiradda Sport ee dalka Spain ku sheegay in howshaasi aysan ahayn mid horey loo qorsheeyay balse ay ku dhacday si lama filaan ah.
“Inuu Busquets koobka kor u qaaday, ma ahayn wax loo qorsheeyay, aniga ayaa ka dalbay inuu igu caawiyo sare u qaadista koobka, mana jiraan sabab kale,”. Iniesta ayaa sidaa ku fasiray sawirkii ay dadku arkeen ee ahaa iyadoo ay koobka wada qaadayaan isaga iyo Busquets.
“Sergio Busquets waa qeyb ka mid ah mustaqbalka kooxda, wuuna ogyahay midaa waana mida ka dhigeysa inuu yahay kabtanka 3-aad ee kooxda kaddib Lionel Messi, laakiin kulanka ka hor kuma fikirin inaan si wada jir ah koobka u wada qaadno, waa wax isku yimid uun.
“Inkastoo aan koobka ku guuleysanay misane xilli ciyaareedku mid xun buu ahaa waayo kuma aynaan guuleysan mid ka mid ah koobabka waa wayn, horyaalka iyo Champions League, waxaan isku dayi doonnaa inaan hagaajino arrimaha xilli ciyaareedka soo socda.”.
Blaise Matuidi oo aan hubin mustaqbalkiisa PSG
Roma oo kula dhagan United daafaca Benfica ee Victor Lindelof